PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - USENGAPHANSI KWEKALAWA "OWEDIMONI" ELIBANGWAYO
USENGAPHANSI KWEKALAWA "OWEDIMONI" ELIBANGWAYO
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA
USESAYINWE yisikhondlakhondla umdidiyeli womculo osematheni kulezi zinsuku, U-ED Harris, ngokubanga ingoma ethi “Lavuk’ idimoni Lami” nevukana emculweni, UNUZ Queen.
Esontweni esiliphethayo, U-ED Harris uvele no-oscar Mdlongwa (DJ Oskido), ongomunye wabanikazi bekalawa Jazmee eyengamele inqwaba yabaculi abaphambili kuleli, ikakhulukazi emculweni womdanso, kukhona amaphepha abawasayinayo.
Baningi asebesayine kule nkampani ngoba bethi kayinayo imigomo ebacindezelayo njengoba ibadedela kalula futhi ibalekelela uma sebefuna ukuzimela. Phakathi kwabo kukhona uprofessor, UDJ Maphorisa nabanye.
Bekucaca ukuthi igcagcele esokeni beveza ezinkundleni zokuxhumana ukuthi kunohambo olusha abaluqalayo.
Ekhuluma NELANGA Langesonto U-ED Harris, ogama lakhe langempela ngumasixole Matshaya, uthe isikhona i-albhamu ephelele abehlela ukuyikhipha ungakapheli lo nyaka njengoba sekusuke isidumo ngale ngoma abebenethemba lokuthi izobalwa kwezincintisana ngengoma yonyaka.
“Isivumelwano nekalawa Jazmee ngesokuphusha umsebenzi wami ozosatshalaliswa yi-universal Music. Indaba KANUZ Queen isazodingidwa, bese sifaka nomthetho,” kusho yena kafushane. Umbango wale ngoma ugqame ngesonto eledlule njengoba UNUZ Queen eseshuthe ne- video yayo le ngoma abamsola ngokuthi uyebile emuva kokuba benqabile ukumnika ayenze i- remix.
UNUZ Queen uzichithile lezi zinsolo, wathi le eshuthelwe i- video
ngeyakhe, akakwazi U-ED Harris ukuba ngumnikazi wento eshiwo yinoma ngubani ( gimmick).
Uphikile nokuthi ubecelile ukuba anikwe imvume yokuyenza kabusha ingoma ebangwayo.
Lishone elangolwesihlanu sekune- remix yayo le ngoma U-ED Harris aseyenze nethimba lasekalawa njengoba sekuthiwa ngekadj Maphorisa & ED Harris ft Pearl, Busiswa, Riky Rick and Sdudla Somdanso. zowakha@ilanganews.co.za